खेलकुद | Sagarmatha TV
सोमवार, साउन २६, २०७७
जिल्ला स्तरीय करातेमा मिसन डोजो बुटवल च्याम्पियन
रुपन्देही । रुपन्देही सियारी ७ अमवास्थित रोज वड एकेडेमीको प्राङ्गणमा प्रथम पदम बहादुर सिंजाली स्मृति जिल्ला स्तरीय कराँते प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । करातेका प्रशिक्षक स्व. पदम बहादुर सिंजालीको सम्झनामा जापान गोजु रियो कराँते डो केन्वाकाई नेपाल संघ रुपन्देही शाखाले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम संयोजक मेख बहादुर क्षेत्रीको सभापतित्व तथा सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारुको […]
बुधबार, भदौ २०, २०७५
साफ सुजुकी कपमा नेपालको अबको खेल कस्तो रहला ? यसो भन्छन् प्रशिक्षक महर्जन
इन्जुरी समयमा सम्हालिन नसक्दा अंक गुम्यो काठमाडौं । बंगलादेशमा मंगलबारबाट शुरु भएको साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तानसँग पराजित भएको छ । मोहम्मद अलीले इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि पाकिस्तानले नेपाललाई २–१ ले पराजित गरेको हो । पाकिस्तानका लागि इन्जुरी टाइमको पाँचौ मिनेटमा अलीले निर्णायक गोल गरेका हुन् । ढाकास्थित बंथबन्धु नेशनल स्टेडियममा भएको खेलको ३६ […]
रजत पदक विजेता नेपाली प्याराग्लाइडिङ खेलाडी र प्रशिक्षकलाई पोखरामा नागरिक अभिनन्दन
कास्की । इण्डोनेसियामा सम्पन्न १८औं एशियाली खेलकुदमा रजत पदक विजेता नेपाली प्याराग्लाइडिङ खेलाडी र प्रशिक्षकलाई पोखरामा नागरिक अभिनन्दन सहित सम्मान गरिएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय तथा जिल्ला खेलकुद विकास समिति र नेपाल हवाई खेलकुद संस्था, नेपाल प्याराग्लाईडिङ तथा ह्याङग्लाईडिङ संघ र पाईलट क्लबले आज संयुक्त रुपमा सम्मानसहित नगर परिक्रमा गराएका हुन् । पोखरा विमानस्थलबाट मुस्ताङचोक, […]
मङ्लबार, भदौ १९, २०७५
एशिया कप छनौट क्रिकेट प्रतियोगिताबाट नेपाल बाहिरियो
काठमाडौं । मलेसियामा जारी एशिया कप छनौट क्रिकेट प्रतियोगिताबाट नेपाल बाहिरिएको छ । आज समुह चरणको पाँचौ खेलमा हङकङसंग पराजित भएसंगै नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो । योसंगै एशिया कप खेल्ने नेपालको सपना समाप्त भएको छ । यसअघि सूरुवाती व्याटिङ गरेको नेपालले ३७ दशमलव ५ ओभरमा अलआउट हुंदै ९५ रन बनाएको थियो । नेपाल हङकङसंग ३ […]
नेपालले हङकङलाई दियो ९६ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । एसिया कप छनोटका महत्वपूर्ण खेलमा नेपालले हङकङलाई ९६ रनको लक्ष्य दिएको छ । आजको खेलसँगै नेपालको एसिया कपमा छनौटका लागि फाइनल खेल्ने सम्भावना पनि लगभग समाप्त भएको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले लगातार विकेट गुमाउँदा हङकङविरुद्ध खराब प्रदर्शन गर्न बाध्य भयो । नेपालका लागि आरिफ शेख र बसन्त रेग्मीले सर्वाधिक […]
गर या मरको खेलमा नेपाल निरिह, ७ विकेटको पतन
काठमाडौं । मलेसियामा जारी एशिया कप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह चरणको अन्तिम खेलमा मङ्गलबार नेपाल र हङकङ भिडिरहेका छन् । टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले खेलमा निरिह प्रदर्शन गरिरहेको छ । समाचार तयार पार्दा २६ ओभरको खेल सकिँदा नेपालले मात्र ६७ रनमा ७ विकेट गुमाइसेको छ । सातमध्ये चार खेलाडीले दोहोरो अंकमा रनसमेत जोड्न […]
साफ सुजुकी कपः इतिहास रच्ने दाउमा नेपाल
पाकिस्तानसँग खेल्दै प्रारम्भ काठमाडौं । बंगलादेशमा आजबाट १० औं संस्करणको साफ सुजुकी कप फुटबलमा शुरु हुँदैछ । नेपालले आफ्नो पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्दै प्रारम्भ गर्दैछ । उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रिन लागिको नेपाली टोलीको पहिलो लक्ष्य भनेको जसरी पनि सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्नु रहेको छ । त्यतिमात्र नभएर नेपाली टोली इतिहास रच्ने दाउमा समेत देखिएको […]
एन्फा र यूएनडीपीबीच १७ बुँदे सम्झौता
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनपिडी) संग दिगो विकाश कार्यक्रम अन्तर्गत १७ योजनामा संझौता गरेको छ । एन्फामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष कर्माछिरीङ शेर्पा र यूएनडिपीका कन्ट्रि मेनेजर रेनोड मेयरबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यो सम्झौता पश्चात एन्फाले फुटबल खेलको लोकप्रियता मार्फत देश र समाजमा सकारात्मक सन्देश दिदै राष्ट्रप्रतिको […]
हङकङलाई हराउन सके पनि नेपालको तनाबिलो स्थिति
काठमाडौं । मलेसियामा जारी एसिया कप क्रिकेट छनोट खेल अन्तर्गत मंगलबार नेपालले हङकङको सामना गर्दै छ । लगातार दुई खेलमा पराजय व्यहोरोको नेपालले त्यसपछिका दुई खेलमा जित हात पार्दै एसिया कप छनोटमा झिनो सम्भावना जिवितै राखेको हो । एसिया कपमा छनोटका लागि नेपाललाई हङकङविरुद्धको खेल गर या मरको स्थितिमा छ । उसले हङकङलाई पराजित गरेर […]
फिफा ‘द बेस्ट’को अवार्ड कस्ले जित्ला ?
काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले वर्षेनी प्रदान गर्दै आएको फिफा ‘द बेस्ट’ अवार्डका लागि अन्तिम तीन खेलाडीको नाम सार्वजनिक भएको छ । यसअघि फिफाले १० खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरको थियो । शीर्ष तीन स्थानमा रियल म्याड्रिडबाट च्याम्पियन्स लिग जितेका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लुका मोड्रीचसँगै लिभरपुलका मोहमद सलाह रहेका छन् । रोनाल्डोले गत सिजन […]
भदौ १ बाट पनि लामो दूरीको यातायात र उडान सञ्चालन नगर्ने निर्णय नजिक सरकार
भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति – बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन्
गौतम बुद्धका विषयमा भारतको टिप्पणी आपत्तिजनक – परराष्ट्र मन्त्रालय
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका पीएसओमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, पौडेल आइसोलेसनमा
काठमाडौँमा थप ९० जना संक्रमित, उपत्यकामा संक्रमित संख्या ११ सय नाघ्यो
आइतबार ३८० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, थप दुईको मृत्यु
तराई मधेसका जिल्लामा तत्काल हवाई उडान नहुँने
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै ४ कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण
गौतम बुद्ध भारतीय नागरिक भन्ने एस जयशंकरको अभिव्यक्तिमा कांग्रेसको आपत्ति
च्याम्पियन्स लिग : क्वाटर फाइनल खेल्ने टोलीको छिनोफानो
गौतम बुद्ध भारतीय नै हुन् : एस जयशंकर
जाजरकोटका चार ठाउँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको नयाँ डिपो
सेनाको निगरानीमा नेपालगञ्ज बजार सिल
रूसमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार २१२ जनामा कोरोना संक्रमण
वीरगञ्जमा मृत्यु भएकी एक महिलामा कोरोना भाइरस पुष्टि
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक
कक्षा १२ को नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी
लोडसेडिङ गराउनेहरु फेरी सक्रिय हुदै : कुलमान घिसिङ
सिभिल होम्सको घर किन्दा पीडै पीडा, नयाँ किन्नेलाई यस्तो सुझाव (भिडियाे सहित)
काठमाडौंको रवीभवनमा सवारी दुर्घटना, मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
बौद्धिक बर्गलाई नै ठग्यो सिभिल होम्सले, न्याय माग्दा उल्टै प्रहरीको कठघरामा
मन्त्रीको हातबाट सिलाई बुनाई मेसिन पाएपछि…
कोरोनाभाइरस संक्रमणको आशंकामा टेकु अस्पतालमा चारजना भर्ना
सरकारले भोलिदेखि विद्यार्थीहरुलाई रेडियो र टिभीबाट पढाउने (तालिकासहित)
सिभिल होम्समा लगानी बालुवामा पानी, सिभिल ग्रुपले यसरी लुट्दै छ ग्राहक
दिल्लीका होटलबाट ७४ नेपाली युवतीको उद्धार (भिडियाे सहित)
कक्षा ११ को परीक्षाफल नतिजा सार्वजनिक
बलात्कार आरोपमा झुठो मुद्धा हाल्ने महिलालाई कैद सजायको फैसला,अदालतमा वयान फेरेपछि ६३ हजार जरिवाना
स्थलमार्ग हुँदै भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर नेपालीले विदेश जान नपाउने
बिहेका लागि केटा नपाएपछि सामुहिक रूपमा बिहेका लागि अपिल
लागुऔषध खैरो हिरोइनसहित लाहानबाट ६ जना पक्राउ
Rudramati Marg, Kathmandu
दर्ता प्रमाणपत्र नं १२२०/०७५-०७६
संचालक : विमल गुरुङ
सम्पादक : कर्णराज पाण्डे
सम्पर्क नं : ०१—५७०७०७१
© २०१६ - २०१९ प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित